Zvitifiketi - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
"Tiri kuda kurarama hupenyu hune hutano."
▍ Kuti tirwe necoronavirus, isu takagadzirisa nekukurumidza kune ayo ekugadzira mitsara. Mask yekugadzira nzvimbo yakawanikwa mune isingasviki mavhiki matatu yakabatsirwa kubva kune yedu yekurapa mudziyo kugadzira ruzivo.
▍ Iye zvino tave nekugona kugovera kwemamiriyoni matatu pcs / zuva uye vanokwanisa neFDA (Dusk Mask) & CE (Medical Mask). Isu tinogara takagadzirira kupa zvitupa kune vanoziva, uye tichitarisira kubatana pamwe nemakambani ese anoda masiki uye zvimwe zvekurapa.
Mune Iri Peji:
▍ Mask Package Nhoroondo
▍ Show Shows
FDA Nha. 2: 006US535558
Chinyorwa Nha .: D374833 (Code: LYU)
Referance No: 20200627
Mawiricheya & Scooter:
▍ Chikamu chega chega chemask chichava nechokwadi chekudzivisa kuputswa panguva yekufambisa. Pasuru Ruzivo rwunoratidzwa senge pazasi (zvese zvemukati nekunze kurongedza). Iwe unogona zvakare kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Iva edu epashure, Kugadzira iri nani furture.
- - KuRehacare, 2019
JBH Kurapa, Bvisa Hupenyu Hwako
medical kumeso masks, masiki anoraswa, chinogadziriswa mubhedha wevarwere, hydraulic murwere anosimudza, zvokurapa chinjika mubhedha, wemagetsi murwere anosimudza,
zvokurapa chinjika mubhedha, medical kumeso masks, masiki anoraswa, wemagetsi murwere anosimudza, hydraulic murwere anosimudza, chinogadziriswa mubhedha wevarwere,